Haa, waan dhintay,’ Madaxweyne Mugabe oo ku kaftamay markii uu ku noqday Zimbabwe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldHaa, waan dhintay,’ Madaxweyne Mugabe oo ku kaftamay markii uu ku noqday Zimbabwe
September 3, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha dalka Zimbabwe, Robert-Mugabe.
Harare-(Puntland Mirror) Madaxweynaha 92-sanno jirka ah ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa tagay dalkiisa kadib markii uu dibada ku maqnaa taasoo keentay xan weyn oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad wuxuuna ku kaftamay inuu dib u soo noolaaday.
“Haa, waan dhintay. Waa run waa dhintay. Dib baan usoo noqday sida aan mar walba samayn jiray. Markii aan dib ugu soo laabtay dalkayga run baan ahay,” Madaxweynaha aduunka ugu da’da weyn ayaa sidaa yiri maanta oo Sabti ah kadib markii uu yimid caasimada Harare.
Waxaa uu ka tagay shir goboleed uu Talaadadii ka qaybgalay, laakiin xogta duulimaadka ayaa muujinaya in uu u duulay magaalada Dubai.
“Waxaan arrimo qoys oo ku saabsan mid kamid ah caruurtayda u aaday Dubai,” ayuu Mugabe u sheegay saxaafada, isagoo aan faahfaahin bixin.
Afhayeenkiisa ayaa qaadacay warar sheegaya in Mugabe uu ku xanuunsaday banaanbaxyo looga soo horjeeday oo dhacay asbuucyadii dhoweyd.
Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeedin doono kulan dhalinyaro oo ka dhacaya xarunta xisbigiisa gelinka dambe maanta oo Sabti ah.
Dalka Zimbabwe ayaa la sheegayaa in dhaqaalihiisa uu hoos u sii dhacayo.
Mugabe ayaa xukunka hayay tan iyo 1980, in badan oo reer Zimbabwe ah waxay aaminsanyihiin in hoggaamiye kale aysan yeelan cimrigooda inta ka harsan.
Waxa uu sheegay in uu dib isku soo taagi doono doorashooyinka dhacaya 2018.
Dhawaan xaaskiisa, Grace, ayaa sheegtay in Mugabe haddii uu dhinto uu dalka ka maamuli doono qabuurta.
November 15, 2017 Milatariga Zimbabwe oo gacanta ku dhigay awooda dalka, sheegayna in Madaxweyne Robert Mugabe uu nabad qabo